Qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdicasis Cali Ibraahin oo Nairobi Ku Soo Bandhigay Buug uu Magac Daray (DAL AAN DADKIISU DAMQASHO LAHAYN)“Sawirro” – Radio Muqdisho
Qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdicasis Cali Ibraahin ( Xildhibaan ) ayaa Maanta magaalada Nairobi ku soo bandhigay buug cusub oo uu ugu magac daray ( DAL AAN DADKIISU DAMQASHO LAHAYN ),waxana qoraagu uu gudoonsiiyey nuqulkii ugu horeeyey ee buugan danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya Amb Maxamed Cali Nuur Americo,isagoo dhanka kala mahadnaq balaaran u soo jeediyey Safaarada Soomaliyeed ee dalka kenya oo qeyb lixaad leh ka qaadatay daabacaada buuggan .
“Buuggan ayaa waxa uu kulminayaa dhamaanba shirarkii dib u hishiisiinta ee dhacay xiligii burburka, ergooyinkii ka qeybgalay iyo dhammaan go’aamadii ka soo baxay shirarkaasi”.
Danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Amb Maxamed Cali Nuur Americo oo la hadlayey warbaahinta qaranka ayaa qoraaga uga mahadceliyey gudoonsiinta buuggan, isagoo ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay dhiiri galiyaan qoritaanka taariikhaha dhaxal galka ah ee ummada soomaaliyeed .
Buuggan Loogu Magacdaray ( DAL AAN DADKIISU DAMQASHO LAHAYN ) ayaa waxa uu xanbaarsan yahay taariikh muhiim ah oo tusineysa jiilka soo socda dadaaladii lixaadka lahaa ee loo soo galay sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafyadii siyaasadeed ee ka jiray dalka soomaaliya .
Waxaana buuggan uu noqonayaa buuggii 8-aad ee ku qoran luuqada soomaaliga ee uu soo bandhigo qoraaga Cabdicasiis Cali ibraahin ( Xildhibaan ) oo ah qoraa soomaaliyeed oo saldhigiisu yahay dalka ingiriiska .
Sawir qaade:-Cabdirahman Cumar Cabdi ( Somali)